Umhlahlandlela Ophelele Wokuthenga We-SARM SR9009 Ukwakha Umzimba
/Blog/Gallery/Umhlahlandlela Ophelele Wokuthenga We-SARM SR9009 Ukwakha Umzimba
Posted on 10 / 14 / 2019 by 阿斯劳 wabhala ku Gallery.
SR9009 noma i-stenabolic iyisengezo se-CAS 1379686-29-9 esilingisa imiphumela yokuzivocavoca kwe-cardio. Umuthi awuzukusiza kuphela ukunciphisa amanye amafutha akho emzimbeni, kodwa futhi kuzothuthukisa amandla akho ngenkathi kukhulisa ukukhuthazela.
I-SR9009 SARM ibamba iqhaza elibalulekile ekuvuseleleni i-Rev-Erb. Le protein iphazamisa amandla omzimba wokushisa amafutha amaningi, ushukela, ne-cholesterol embi. Ngakho-ke, inyusa inqubo yokwehlisa isisindo ngenkathi ithuthukisa ukukhuthazela. Noma ngabe ubulolonga umzimba, uzozizwa unamandla futhi ungakhathali kangako ukuze ukwazi ukuzivocavoca umzimba ngokwengeziwe.
I-stenabolic igaya amafutha, i-lipids, noshukela. Lapho ukusetshenziswa kukaphethiloli komzimba kukhulu, khona-ke ngokungangabazeki uzothola ukusebenza okuphezulu. Esifundweni sangaphambi kokusebenzisa imodeli ye-murine, amagundane abengaphansi kwe- I-SR9009 powder (I-1379686-30-2) umthamo ungaqhubeka ngokushesha ngokushesha kunangaphambili. Le ngxenye yobufakazi ingaba yisizathu esenza ukuthi i-stenabolic ifakwe kuhlu phakathi kwezidakamizwa ezingavunyelwe kwezemidlalo.
Uma ungeyena umuntu we-maniac wokuzivocavoca, lezi zindaba yilokho izindlebe zakho ezifisa ukukuzwa. I-stenabolic ibuye iphindwe kabili isilinganiso sakho semethabhothi ngenkathi uphumule. Ngemuva kokudla, umzimba wakho ngokujwayelekile ukuguqula ukudla kube ngamafutha. Kodwa-ke, isithasiselo sokulahlekelwa kwesisindo se-SR9009 sizokhulisa ngokushesha imetabolism yokuthi uzoqala ukushisa la mafutha khona manjalo.
I-SR9009 SARM ithuthukisa izinqubo ze-metabolic. Lapho ukungenisa sekwenzekile, i-stenabolic ibizohlela umzimba ukuthi ushise ama-calories amaningi kunokuwuguqula ube ngamafutha. Isengezo asilinganisi nje kuphela izakhi zofuzo ezigcina amafutha, kodwa futhi sinciphisa ukukhiqizwa kwamaseli amasha amafutha esibindini.
Lesi sithasiselo asigcini ngokwandisa ubukhulu bemisipha kepha sithuthukisa namandla nokusebenza kwaso. Umuzwa owuthola ngemuva kokufaka isilinganiso se-SR9009 ulingana nalowo wokuphakamisa izinsimbi.
Ngokomtholampilo, i-SR9009 izuzisa asebekhulile abahlushwa ukonakala kwemisipha noma i-sarcopenia.
Iningi labavocavoci bomzimba ngeke liphuthelwe ukufaka imisipha ye-SR9009 ohlelweni lwabo lokwakha umzimba. Uzophakamisa izinsimbi, usebenzise umshini wokunyathelisa, noma wenze noma ikuphi ukuzivocavoca umzimba ngaphandle kokuzizwa ukhathele noma unenhloko encane.
Isengezo ngokungangabazeki sizothatha ukusebenza kwakho njenge-notch ephakeme kunangaphambili. Uma ubucabanga ukuthi lezi zinzuzo ze-SR9009 zingumkhonyovu, kufanele ubuze ukuthi kungani i-anti-doping agency izokuvimbela ngokuqinile ukusetshenziswa kwayo kwezemidlalo yokuncintisana.
Njengoba uThomas Burris, umsunguli we-Stenabolic, esho, lesi sidakamizwa sikuguqula ube ngumsubathi ongumakadebona esikhathini esithile. Ngeke uphelelwe amandla noma amandla noma ngabe wenza izivivinyo ezinkulu.
Ngenxa yesigamu sempilo ye-SR9009, umphumela wokuvuka uzoba wesikhashana. Ngakho-ke, ngeke ube ne-insomniac usuku lonke.
Isikhathi sempilo se-SR9009 sifushane njengamahora amane. Ngalesi sizathu, kufanele uhlukanise isilinganiso sakho ngezikhathi zamahora amane ukuze uzinze ukutholakala komuthi egazini.
Ama-hingeges we-SR9009 ezintweni ezimbalwa. Lokho, lokho ofisa ukukufeza nokuthi ngabe ufaka ezinye izithako kumjikelezo wakho. Ngaphandle kwalokho, inani lemithi kadokotela nalo lincike ekutheni umzimba wakho usabela kanjani.
I-Stenabolic akuyona i i-steroid. Ngakho-ke, ukuyithatha ngeke kuphazamise uhlelo lwe-hormonal. Izinga lakho le-testosterone ngeke lehle, futhi nomuthi awunakungenisa i-estrogen. Kwabesifazane, isengezo ngeke siholele kumjikelezo wokuya esikhathini ngokungajwayelekile.
Njengoba usuvele wazi, i-stenabolic ine-half-life esheshayo, engeke ikugcine usuku lonke. Ngokuphambene nalokho, ukutholakala kwe-cardarine kufinyelela emahoreni angama-24. Ukuhlanganiswa kwalaba ababili kuzoholela kumthelela we-24/7.
Lapho usesitaki se-SR9009, isilinganiso siyi-10mg kuphela, okufanele uyithathe ngaphambi nje kokuzivocavoca. Okwe-GW501516, umuthi ofanelekayo ongu-20mg / ngosuku, okufanele uwuphathe ngesidlo sasekuseni sakho.
Kube nokuqagela ukuthi i-SR9009 ine-zero bioavailability, ikakhulukazi ekuphathweni ngomlomo. Kodwa-ke, ngingakuphika ngokuzethemba lokhu ngoba uma isengezo besingatholakali, bekungeke kube nemiphumela emihle ye-SR9009 emzimbeni womuntu.
Abakhi bomzimba ngemuva kokuqunjelwa noma ukusikwa bazozuza ngokuphelele kwi-SR9009. Ezimweni lapho kufanele uqeqeshe kanzima khona, lesi sidakamizwa sikhuphula izinga lokushaya kwenhliziyo yakho, ngaleyo ndlela sinciphise ikhanda elikhanyayo nokukhathala. Ngaphezu kwalokho, isengezo sokwakha umzimba se-SR9009 sinciphisa ukuvuvukala nokonakala kwezicubu ukuze inqubo yokutakula isheshe ngangokunokwenzeka.
Kodwa-ke, ukusebenza kahle kwalesi sidakamizwa kube yithambo lombango phakathi kososayensi nabacwaningi nososayensi bebonke. Isibonelo, kube nama-anecdotes okuthi i-SR9009 oral bioavailability ingu-zero. Hhayi, angifisi ukwenza njengommeli kasathane, kepha ama-95% wabasebenzisi be-stenabolic baqinisekisa ukusebenza kwayo. Ngaphandle kwalokho, kufanele ngabe ubuza ukuthi kungani izinhlangano ezilwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa zingaba nesibindi sokuvimba ukusetshenziswa kwazo kwezemidlalo lapho into ingasebenzi kahle.
Imibono evamile eyiphutha ezweni le-anabolic steroid Konke mayelana ne-Oxandrolone (Anavar), udinga ukwazi